ဖူဟမ် ၁ – ၂ လီဗာပူးးအဝေးကွင်းမှာ ဖူဟမ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ အနိုင်ကစားကာ PL အမှတ်ပေးဇယား ရဲ့ ထိပ်ဆုံး နေရာကို ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသင်း - SPORTS MYANMAR
ဖူဟမ် ၁ – ၂ လီဗာပူးးအဝေးကွင်းမှာ ဖူဟမ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ အနိုင်ကစားကာ PL အမှတ်ပေးဇယား ရဲ့ ထိပ်ဆုံး နေရာကို ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသင်း
လီဗာပူး Line-up – 4-3-3
အလီဆွန် ၊ အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး ၊ ဗန်ဒိုက် ၊ မာတစ် ၊ ရောဘတ်ဆန် ၊ ၀ိုင်နယ်ဒန် ၊ ဖာဘင်ညို ၊ လယ်လာနာ ၊ ဆာလား ၊ မာနေး ၊ ဖာမီနို
ဖူဟမ် Line-up – 4-2-3-1
ရီကို ၊ ဖိုဆူ မန်ဆက် ၊ ချိန်ဘာ ၊ တင်ရင်း ၊ ဆီရီ ၊ ကာနေး ၊ အန်ဂိဆာ ၊ အယိတဲ ၊ မီထရိုဗစ် ၊ ဘာဘယ်
ပွဲအစကတည်းက လီဗာပူး အသင်းဟာ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီး နဲ့ ရောဘတ်ဆန် ၊ အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး တို့ရဲ့ တောင်ပံတွေ ကနေ အဓိက ထိုးဖောက် ကစား ခဲ့သလို ဖူဟမ်ကလည်း ဘာဘယ်ရဲ့ ဘယ်တောင်ပံကနေ တစ်ချက် တစ်ချက် ပြန်လည် ထိုးဖောက်ခဲ့ ပါတယ်။ ၁၀ မိနစ် မှာတော့ လီဗာပူးတို့ အခွင့်အရေးကောင်း တစ်ခု ရရှိ ခဲ့ပြီး နောက်တန်းကနေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို ရော်ဘတ်ဆန် တောင်ပံကနေ ဆွဲပြေးကာ ဖြတ်တင်ပေးမှုကို ရီကို ဖမ်းမိ သွားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် လီဗာပူးအသင်းဟာ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အတွဲအဖက်တွေ လွဲချော် နေတာကြောင့် မယ်မယ်ရရ အခွင့်အရေး မရ ခဲ့ပါဘူး။
Fulham’s English defender Joe Bryan (L) vies with Liverpool’s English midfielder Adam Lallana during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on March 17, 2019. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Goal!! ပွဲချိန် ၂၅ မိနစ်မှာတော့ လီဗာပူး အတွက် နောက်ပိုင်း ပွဲစဉ်တွေမှာ လီဗာပူး အတွက် ဂိုးတွေ တောက်လျှောက် သွင်းယူ ပေးနေတဲ့ မာနေးကပဲ ဖာမီနို ရဲ့ ဖန်တီး ပေးမှုကနေ တဆင့် အကောင်းဆုံး အဆုံးသတ်ကာ လီဗာပူး အတွက် ဦးဆောင်ဂိုးကို သွင်းယူ ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် လီဗာပူး အသင်းကပဲ ဦးဆောင်ကစား သွားခဲ့ပြီး ၂၈ မိနစ်မှာ ဆာလား ရဲ့ အဝေးကန်ချက် ကောင်းခဲ့ပေမယ့် ရီကို ဖမ်းမိ ခဲ့ပါတယ်။ ၃၄ မိနစ် မှာတော့ ဘယ်တောင်ပံ ကနေ တဆင့် ရောဘတ်ဆန် ပင်နယ်တီ ဧရိယာထဲ ဆွဲဝင်ကာ ကန်သွင်းတဲ့ ကန်ချက် ကောင်းခဲ့ပေမယ့် ရီကို နဲ့ ထိထွက် ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဘာဘယ်ရဲ့ ဘယ်တောင်ပံကနေ တစ်ကိုယ်တော် ထိုးဖောက်မှု ကနေ တဆင့်ရလာတဲ့ ဘောလုံးကို ကန်နီ ကန်သွင်းရာမှာ ဂိုးဘားတန်းပေါ် ကျော်သွား ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း ၄၇ မိနစ်မှာ တော့ ဆာလား လယ်လာနာ ၀ိုင်နယ်ဒန် တို့ရဲ့ တွဲလုံး ကနေ တဆင့် ဖာမီနို နောက်ပေါက်နဲ့ပိတ်သွင်း ခဲ့ပေမယ့် ဖူဟမ် နောက်တန်း ပိတ်ဆို့မှု ကောင်းခဲ့တာကြောင့် ဂိုးမရ ခဲ့ပါဘူး။ ၅၁ မိနစ်မှာတော့ ရောဘတ်ဆန် ဘယ်တောင်ပံ ကနေ ခုတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံး ကောင်းမွန် ခဲ့ပေမယ့်လည်း ၀ိုင်နယ်ဒန် ခေါင်းတိုက်ချက် ညံ့ခဲ့တာကြောင့် နောက်ထပ် ဦးဆောင်ဂိုးနဲ့ ဝေးခဲ့ ရပါတယ်။
Liverpool’s German manager Jurgen Klopp runs back to the dressing room at during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on March 17, 2019. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
၅၅ မိနစ်မှာတော့ လီဗာပူးတို့ အခွင့်အရေးကောင်း ရရှိ ခဲ့ပြီး ဖာဘင်ညိုရဲ့ ဖြတ်တင်ဘောကို ဗန်ဒိုက် ခေါင်းတိုက် ခဲ့ပေမယ့် ရီကို လက်စွမ်းပြ ခဲ့ပါတယ်။ ၆၃ မိနစ်မှာတော့ ဖူဟမ် တို့ ဂိုးရခဲ့ပေမယ့် လူကျွံခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူး တို့ ကံကောင်းခဲ့ ပါတယ်။ ၆၇ မိနစ်မှာလည်း တန်ပြန် တိုက်စစ် ကနေ တဆင့် ဖူဟမ် တို့ အခွင့်အရေး ရခဲ့ပြီိး အန်ဂိဆာ ကန်သွင်းမှု ကောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း အလီဆွန် ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
၇၂ မိနစ်မှာတော့ ထောင့်ကန်ဘော ကနေ မာနေး ရဲ့ ခေါင်းတိုက်ချက် ကောင်းခဲ့ ပေမယ့်လည်း တိုင်ထိ ထွက်ခဲ့ ပါတယ်။ ၇၃ မိနစ်မှာတော့ ဗန်ဒိုက် နဲ့ အလီဆွန် တို့ရဲ့ နားလည်မှု လွဲမှား ရာကနေ ဘာဘယ် က ချေပဂိုး သွင်းပေး ခဲ့ပါတယ်။ မိနစ် ၈၀ မှာတော့ ဆာလား ရဲ့ ကန်ချက် ရီကို ပုတ်ရာကနေ လွတ်သွားခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို မာနေး ရရှိ ခဲ့ပေမယ့် ရီကို ဆွဲလှဲ ခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူးတို့ ပင်နယ်တီ ရခဲ့ပြီး မီနာ က အဆုံးသတ် ကန်သွင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။
၈၄ မိနစ်မှာ ဆာလား မီနာ တို့ရဲ့ တွဲလုံးကနေ ၀ိုင်နယ်ဒန် ဂိုးဧရိယာထိပ်ကနေ ကန်သွင်းမှု ကောင်းခဲ့ပေမယ့် ကပ်ပြီး လွဲခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု အသာနဲ့ ထိန်းကစား လာတဲ့ လီဗာပူးဟာ ၈၆ မိနစ်မှာ တန်ပြန် တိုက်စစ်ကနေ အခွင့်အရေး ထပ်ရခဲ့ပြီး မာနေး ဆွဲပြေး လာခဲ့ကာ ဆားလားကို ဖန်တီး ပေးခဲ့ပေမယ့် ဂိုးသမားနဲ့ တည့်တည့်သာ ကန်သွင်း ခဲ့တာကြောင့် တတိယ ဦးဆောင်ဂိုးနဲ့ ဝေးခဲ့ ပါတယ်။ ထို့နောက် လီဗာပူး တို့ အဆိုပါ အနိုင်ရလဒ်ကို သေချာအောင် ထိန်း ကစား သွားခဲ့ပြီး ခရေဗင်ကော့တစ်ခ်ျ ကနေ အပြန် အနိုင် ၃ မှတ် ရယူ ခဲ့ပါတယ်။
Fulham’s Serbian striker Aleksandar Mitrovic (C) vies with Fulham’s Belgian defender Denis Odoi (R) during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on March 17, 2019. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် လီဗာပူး အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ၃၁ ပွဲ ကစား အပြီးမှာ ရမှတ် ၇၆ မှတ်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ကို ပြန်လည် တက်လှမ်း သွားနိုင် ခဲ့ပြီး ဒုတိယ နေရာက တစ်ပွဲလျော့ ကစား ထားတဲ့ မန်စီးတီးကို ၂ မှတ် အသာ နဲ့ ပြန်လည် ဦးဆောင်ကာ ချန်ပီယံ အိမ်မက်ကို ဆက်လက် အသက်သွင်း ခဲ့ပါတယ်။
ဖူဟမျ ၁ – ၂ လီဗာပူးးအဝေးကှငျးမှာ ဖူဟမျကို ခကျခကျခဲခဲ အနိုငျကစားကာ PL အမှတျပေးဇယား ရဲ့ ထိပျဆုံး နရောကို ပွနျလညျ ရောကျရှိလာခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသငျး
အလီဆှနျ ၊ အလကျဇနျးဒါးအာနိုး ၊ ဗနျဒိုကျ ၊ မာတဈ ၊ ရောဘတျဆနျ ၊ ၀ိုငျနယျဒနျ ၊ ဖာဘငျညို ၊ လယျလာနာ ၊ ဆာလား ၊ မာနေး ၊ ဖာမီနို
ဖူဟမျ Line-up – 4-2-3-1
ရီကို ၊ ဖိုဆူ မနျဆကျ ၊ ခြိနျဘာ ၊ တငျရငျး ၊ ဆီရီ ၊ ကာနေး ၊ အနျဂိဆာ ၊ အယိတဲ ၊ မီထရိုဗဈ ၊ ဘာဘယျ
ပှဲအစကတညျးက လီဗာပူး အသငျးဟာ ဘောလုံး ပိုငျဆျိုငျမှုအသာစီး နဲ့ ရောဘတျဆနျ ၊ အလကျဇနျးဒါးအာနိုး တို့ရဲ့ တောငျပံတှေ ကနေ အဓိက ထိုးဖောကျ ကစား ခဲ့သလို ဖူဟမျကလညျး ဘာဘယျရဲ့ ဘယျတောငျပံကနေ တဈခကျြ တဈခကျြ ပွနျလညျ ထိုးဖောကျခဲ့ ပါတယျ။ ၁၀ မိနဈ မှာတော့ လီဗာပူးတို့ အခှငျ့အရေးကောငျး တဈခု ရရှိ ခဲ့ပွီး နောကျတနျးကနေ တငျပေးလိုကျတဲ့ ဘောလုံးကို ရျောဘတျဆနျ တောငျပံကနေ ဆှဲပွေးကာ ဖွတျတငျပေးမှုကို ရီကို ဖမျးမိ သှားခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ လီဗာပူးအသငျးဟာ တိုကျစဈပိုငျးမှာ အတှဲအဖကျတှေ လှဲခြျော နတောကွောငျ့ မယျမယျရရ အခှငျ့အရေး မရ ခဲ့ပါဘူး။
Goal!! ပှဲခြိနျ ၂၅ မိနဈမှာတော့ လီဗာပူး အတှကျ နောကျပိုငျး ပှဲစဉျတှမှော လီဗာပူး အတှကျ ဂိုးတှေ တောကျလြှောကျ သှငျးယူ ပေးနတေဲ့ မာနေးကပဲ ဖာမီနို ရဲ့ ဖနျတီး ပေးမှုကနေ တဆငျ့ အကောငျးဆုံး အဆုံးသတျကာ လီဗာပူး အတှကျ ဦးဆောငျဂိုးကို သှငျးယူ ပေးခဲ့ပါတယျ။
ထို့နောကျ လီဗာပူး အသငျးကပဲ ဦးဆောငျကစား သှားခဲ့ပွီး ၂၈ မိနဈမှာ ဆာလား ရဲ့ အဝေးကနျခကျြ ကောငျးခဲ့ပမေယျ့ ရီကို ဖမျးမိ ခဲ့ပါတယျ။ ၃၄ မိနဈ မှာတော့ ဘယျတောငျပံ ကနေ တဆငျ့ ရောဘတျဆနျ ပငျနယျတီ ဧရိယာထဲ ဆှဲဝငျကာ ကနျသှငျးတဲ့ ကနျခကျြ ကောငျးခဲ့ပမေယျ့ ရီကို နဲ့ ထိထှကျ ခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ ဘာဘယျရဲ့ ဘယျတောငျပံကနေ တဈကိုယျတျော ထိုးဖောကျမှု ကနေ တဆငျ့ရလာတဲ့ ဘောလုံးကို ကနျနီ ကနျသှငျးရာမှာ ဂိုးဘားတနျးပျေါ ကြျောသှား ခဲ့ပါတယျ။
ဒုတိယပိုငျး ၄၇ မိနဈမှာ တော့ ဆာလား လယျလာနာ ၀ိုငျနယျဒနျ တို့ရဲ့ တှဲလုံး ကနေ တဆငျ့ ဖာမီနို နောကျပေါကျနဲ့ပိတျသှငျး ခဲ့ပမေယျ့ ဖူဟမျ နောကျတနျး ပိတျဆို့မှု ကောငျးခဲ့တာကွောငျ့ ဂိုးမရ ခဲ့ပါဘူး။ ၅၁ မိနဈမှာတော့ ရောဘတျဆနျ ဘယျတောငျပံ ကနေ ခုတျတငျပေးလိုကျတဲ့ ဘောလုံး ကောငျးမှနျ ခဲ့ပမေယျ့လညျး ၀ိုငျနယျဒနျ ခေါငျးတျိုကျခကျြ ညံ့ခဲ့တာကွောငျ့ နောကျထပျ ဦးဆောငျဂိုးနဲ့ ဝေးခဲ့ ရပါတယျ။
၅၅ မိနဈမှာတော့ လီဗာပူးတို့ အခှငျ့အရေးကောငျး ရရှိ ခဲ့ပွီး ဖာဘငျညိုရဲ့ ဖွတျတငျဘောကို ဗနျဒျိုကျ ခေါငျးတျိုကျ ခဲ့ပမေယျ့ ရီကို လကျစှမျးပွ ခဲ့ပါတယျ။ ၆၃ မိနဈမှာတော့ ဖူဟမျ တို့ ဂိုးရခဲ့ပမေယျ့ လူကြှံခဲ့တာကွောငျ့ လီဗာပူး တို့ ကံကောငျးခဲ့ ပါတယျ။ ၆၇ မိနဈမှာလညျး တနျပွနျ တိုကျစဈ ကနေ တဆငျ့ ဖူဟမျ တို့ အခှငျ့အရေး ရခဲ့ပွီိး အနျဂိဆာ ကနျသှငျးမှု ကောငျးခဲ့ပမေယျ့လညျး အလီဆှနျ ကာကှယျ နိုငျခဲ့ ပါတယျ။
၇၂ မိနဈမှာတော့ ထောငျ့ကနျဘော ကနေ မာနေး ရဲ့ ခေါငျးတျိုကျခကျြ ကောငျးခဲ့ ပမေယျ့လညျး တိုငျထိ ထှကျခဲ့ ပါတယျ။ ရ၃ မိနဈမှာတော့ ဗနျဒိုကျ နဲ့ အလီဆှနျ တို့ရဲ့ နားလညျမှု လှဲမှား ရာကနေ ဘာဘယျ က ခပြေဂိုး သှငျးပေး ခဲ့ပါတယျ။ မိနဈ ၈၀ မှာတော့ ဆာလား ရဲ့ ကနျခကျြ ရီကို ပုတျရာကနေ လှတျသှားခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို မာနေး ရရှိ ခဲ့ပမေယျ့ ရီကို ဆှဲလှဲ ခဲ့တာကွောငျ့ လီဗာပူးတို့ ပငျနယျတီ ရခဲ့ပွီး မီနာ က အဆုံးသတျ ကနျသှငျး ပေးခဲ့ပါတယျ။
၈၄ မိနဈမှာ ဆာလား မီနာ တို့ရဲ့ တှဲလုံးကနေ ၀ိုငျနယျဒနျ ဂိုးဧရိယာထိပျကနေ ကနျသှငျးမှု ကောငျးခဲ့ပမေယျ့ ကပျပွီး လှဲခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ ဘောလုံး ပိုငျဆျိုငျမှု အသာနဲ့ ထိနျးကစား လာတဲ့ လီဗာပူးဟာ ၈၆ မိနဈမှာ တနျပွနျ တိုကျစဈကနေ အခှငျ့အရေး ထပျရခဲ့ပွီး မာနေး ဆှဲပွေး လာခဲ့ကာ ဆားလားကို ဖနျတီး ပေးခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးသမားနဲ့ တညျ့တညျ့သာ ကနျသှငျး ခဲ့တာကွောငျ့ တတိယ ဦးဆောငျဂိုးနဲ့ ဝေးခဲ့ ပါတယျ။ ထို့နောကျ လီဗာပူး တို့ အဆိုပါ အနိုငျရလဒျကို သခြောအောငျ ထိနျး ကစား သှားခဲ့ပွီး ခရဗေငျကော့တဈချြ ကနေ အပွနျ အနိုငျ ၃ မှတျ ရယူ ခဲ့ပါတယျ။
ဒီနိုငျပှဲကွောငျ့ လီဗာပူး အသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ၃၁ ပှဲ ကစား အပွီးမှာ ရမှတျ ရ၆ မှတျနဲ့ အမှတျပေးဇယား ထိပျကို ပွနျလညျ တကျလှမျး သှားနိုငျ ခဲ့ပွီး ဒုတိယ နရောက တဈပှဲလြော့ ကစား ထားတဲ့ မနျစီးတီးကို ၂ မှတျ အသာ နဲ့ ပွနျလညျ ဦးဆောငျကာ ခနျြပီယံ အိမျမကျကို ဆကျလကျ အသကျသှငျး ခဲ့ပါတယျ။